Degdeg: Kulamo Siyaasadeed oo Wali Kismaayo ka soconaya, iyo Heshiiskii shalay dhacay oo Maanta la shaacin doono. – Gedo Times
17th March 2016 admin Wararka Maanta 3
Iyadoo shalay Magaalada Kismaayo lagu soo afmeeray Kulan dib u heshiisiineed o ou dhaxeeyey Beesha Sade iyo Axmed Madoobe, ayaa Maanta waxaa qorshuhu yahay in lakala saxiixdo qodobadii lagu heshiiyay loona istagao sidii lo odhaqan galin lahaa.
Kulamo kala gadisan aya amsuuliyiinta ilaa xalay waxay uga socdeen magaalada Kismaayo,waxaana muuqata isu soo dhawaansho iyo is faham ka imaanaya dhamaan dhinacadii ku hardamayay SIyaasadda Jubaland.
Galinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in kulanka heshiiska lagu kala saxiixanaayo uu ka dhaco magaalada kismaayo, waxaana goobjoog ka noqon doona dhamaan dhinacyada ay arintani quseyso iyo korjoogayaal caalami ah oo dabagal ku sameyn doona dhaqan galinta heshiiskani.
Ma Cadda fulinta qodobadani cida masuuliyadeeda qaadan doonto inkastoo dhexdhexaadiyayaashii kulankani ay ugu baaqeen dhinacyada in fulinta heshiiska daacad laga wada noqdo bacdamaa Ree Jubaland uu Hehsiiskani u yahay Mid taariikhi ah.
Daawo:Shirkii dib uheshiisiinta beelaha Jubbaland oo guul ku dhammaaday